Abakwa-Raw Arnica Montana abahlinzeki be-powder HPLC≥98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Arnica Montana powder
Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-Arnica Montana powder, ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Arnica Montana powder iyingozi kakhulu uma ingenwe amandla aphelele, kodwa ingasetshenziswa njengamafutha, i-gel noma ukhilimu esikhunjeni esingenqamukile noma esithathwe ngaphakathi uma ihlaziywa ekhayaopathically. U-Arnica ukhulile waba omunye wemithi ethandwa kakhulu e-homeopathic emhlabeni jikelele ....
I-Arnica Montana powder video
Arnica Montana powder Abalingiswa basisekelo
Ukusetshenziswa kwe-Arnica Montana powder
Amagama avamile e-Arnica Montanaare Intaba i-daisy, i-Leopard's kanye ne-Mountain Mountain.
Umthamo omkhulu we-Arnica Montana powder
Ayikho imithi ejwayelekile ye-Arnica Montana powder noma yinani elithile eliphakanyiswa kakhulu; kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokusetshenziswa okuhlukile. Amanani okufanele kufanele axoxwe ngaso kuqala ngoprofayili wezempilo, futhi kufanele ufundele ilebula lomkhiqizo ngokucophelela ngaphambi kokuba uthathe noma yini.
I-Arnica Montanais inobuthi lapho ithathwa ngomlomo ngaphandle kokuthi ihlanjululwe emithini ye-homeopathic efana ne-30X noma i-200D.
Isexwayiso ku-Arnica Montana powder eluhlaza
I-Homeopathy iyisimiso semithi esekelwe kulokho okubizwa ngokuthi "isimiso esifana nokuphulukiswa okufana nokuphulukiswa," lapho into eyenza ngempela izimpawu kumuntu onempilo isetshenzisiwe (ngezilinganiso eziphansi kakhulu) ukuphatha izimpawu ezifanayo ngqo umuntu ogulayo. Ngakho-ke, ku-homeopathy, izixazululo zisebenza kangcono uma zihlanjululwa kakhulu: i-200C ingaphezu kwesilinganiso se-6C.
I-Arnica Montanacan nayo isetshenziselwa ukunciphisa ukuqina komshayeli noma ukushayela ibanga elide. Futhi noma ubani ophazamisayo kalula uzokwazi ukukwazi ukukhishwa kwe-Arnica Montana.
Ukuze usize ukuphulukiswa kokulimala okuncane, ukwedlulela ngokweqile noma ukuhlinzwa, u-Arnica Montanais kufanele abe nayo yonke ikhabhinethi yemithi. Kungakhathaliseki ukuthi ungumntwana osebenzayo, i-warrior yeviki noma umdlali wezemidlalo, kuyiphendule ephelele kuyo yonke yokulimala okuncane.
Indlela yokuthenga i-Arnica Montana powder kusuka ku-AASraw
I-Mitoxantrone HCL powder